Macluumaadka Taranka Jarmalka Adhijirka Wolf Mix, Sawirada & Qiimaha - Taranka
Kuwo badan ayaa rumaysan in eeyaha ay ka soo saareen yeey wax ka badan 15,000 sano ka hor. Laakiin maxaa dhacaya markii yeeyda aan la daaweynin eey lagu cuno eey?
The German Shepherd Wolf Mix waa hal tusaale oo qurux badan.
Mararka qaarkood loo yaqaan 'Wolf Shepherd' noocyadan xoogga leh maaha kuwa bilowga ah. Waxay u baahan yihiin jimicsi, tababar iyo is dhexgal bulsho.
Maqaalkani, waxaan la wadaageynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nooca, taariikhdooda, dabeecadooda, iyo shakhsiyaddooda, iyo sidoo kale jimicsigooda, la dhaqanka bulshada, iyo shuruudaha tababarka ...
Waa Maxay A German Shepherd Wolf Mix?
Maxaan ugu Jecelahay Wolfdogkan
Jarmalka Adhijirka ah ee 'Wolf Mix Puppies'
Muuqaalka Taranka, Midabka, iyo Cabirka
Shepherd Jarmal Wolf Mix Dabeecadda
Ma yihiin Eeyo Qoys Wanaagsan?
Arimaha Caafimaadka ee Layaqaan
Hagaha Daryeelka (Qurxinta, Quudinta & Jimicsiga)
Noocani waa sida magacoodu u eg yahay - badh Jarmal Shepherd iyo badh Eurasian Wolf.
Isku darka 'Shepherd Wolf Wolf' wuxuu isku daraa astaamaha ugu wanaagsan ee astaamaha Shepherd Jarmal iyo Wolf. Isku darkaani wuxuu xambaarsan yahay astaamo yey u eg oo adag waxaana badanaa lagu qaldaa yeey duurjoogta ah.
1935, Leendert Saarloos wuxuu ku dhajiyay adhijir Jarmal ah oo leh Eurasian Wolf.
Leendert wuxuu ku magacaabay nooca a Saarloos Wolfdog .
Wuxuu ubooday yeygan hadaf ujeedadiisu tahay inuu ilaaliyo astaamaha dabiiciga ah iyo muuqaalka yeeyda eeyga eyga. Wuxuu ku guuleystey taranka Jarmalka Adhijirka Wolf Mix ee adduunka ugu horreeyey wuxuuna ku tilmaamay eyga inuu yahay: mid ilaaliya, daacad ah oo dadaal badan.
Laga soo bilaabo barnaamijkii taranka ee Leendert waxyaabo badan oo iskudhaf ah oo yey ah ayaa la soo saaray sida Czechoslovakian Wolfdog, Tamaskan Dog iyo Northern Inuit Wolf Dog.
In kasta oo ay caan yihiin, iskudhafka yeydu waa sharci darro ka ah gobollo badan . Sidoo kale looma aqoonsan inay yihiin eey rasmi ah oo ay leeday Naadiga Kennelka Mareykanka sababo la xiriira saadaalin la'aan.
Si loo sii fahmo eeyga qaybtiisa yeyda duurjoogta ah waxaa lagama maarmaan ah inaan si dhow u eegno labada nooc ee waalidka.
Waxaa jira laba nooc oo yeey ah oo waaweyn oo lagu cuno eyga Shepherd Jarmalka:
Carpathian Wolf - ayaa la soo saaray Husky si loo siiyo Czechoslovakian Wolfdog .
Duurjoogta yeeydu waxay u shaqeysaa si adag si ay ugaarsadaan cuntadooda sidaa darteed waxay leeyihiin anshax xoog leh iyo dareen ugaarsi.
Yeydu waa nooc ka mid ah ugaarsiga duurjoogta.
Qofna kuma guuleysan inuu si buuxda u daaqsado yeey duurjoog ah . Had iyo jeer heer aan la saadaalin karin ayaa jira noocyadan waana mid aad u adag in lala dhexgalo iyaga oo leh jawi nin-abuuray.
Muuqaal u eg Wolf, oo ah Adhijirka Jarmalka ayaa markii ugu horreysay la dhajiyay 1899 waxaa qoray Max von Stephanitz .
Adhijirka Jarmalka waa nooc ey caan ah oo caan ku ah dareenkooda ilaalin iyo sirdoon.
Waa eey daacad ah taasi waa shaqo adag. Anshax xumadooda shaqo ayaa ah mid ka mid ah sababaha ay ugu jecel yihiin booliska iyo militariga.
Si kastaba ha noqotee, Adhijirka Jarmalku ma aha oo kaliya nooc shaqo ah. Awooddooda in si fudud loo tababaro oo loo dhaqdo waxay keentay caan ku sii kordheysa sida eeyga qoyska.
Isku darka 'Shepherd Wolf Wolf' waa nooc qurux badan oo wadaaga astaamo badan oo la mid ah yeyda.
Noocani waa mid aad u ilaaliya. Mid ka mid ah wadaha Jarmalka iyo Wolf ay wadaagaan waa shakhsiyaddooda daacadda ah.
50 illaa 120 rodol
In ka yar 24 inji
9 ilaa 13 sano
Eygan ayaa sida caadiga ah ku kacaya $ 800 illaa $ 1,000.
Sababtoo ah noocani waa mid aad dhif u ah, qiimahoodu wuxuu gebi ahaanba ku tiirsan yahay soosaaraha mana aha dalab iibsade, maadaama ay ku badan tahay eyda badankood.
Soosaarayaal khibrad leh oo soo jiitay jiilal badan oo eeyaha reer German ah oo ah Shepherd Wolf Mix ayay u badan tahay inay ka qaadaan $ 1,000. Qashin kasta caadiyan wuxuu leeyahay lix eeyo. Tani waxay ku saleysan tahay celceliska qashinka xajmiga yeeyda oo ah afar ilaa lix eeyo iyo Shepherd Jarmal ah siddeed Ey.
Ka dib markaad korsato eeyahaaga siddeed toddobaad markuu jiro, tobanka toddobaad ee soo socdaa waa kuwo aad u badan daaqad bulsho muhiim ah .
Ahaanshaha isku dhaf aan la saadaalin karin iyo qeyb yeey ah, waa inaad ka fileysaa inaad waqti badan ku bixiso tababarka iyo inaad la dhaqanto eeygaaga.
Bixiye wanaagsan ayaa hubin doona inaad awood u siin karto ardaygaaga tababar ku filan iyo is dhexgal bulsho - gaar ahaan isku dhafkan.
Si ka duwan inta badan eeyaha isku dhafan, aqoonsashada isku dhafka Jarmalka Shepherd Wolf waa mid aad u fudud.
Adhijirka Jarmalka wuxuu la wadaagayaa astaamo badan oo muuqaal la mid ah yeyda oo sidaas darteed isku dhafkan sidoo kale wuu sameeyaa.
Eygan ayaa ah yeey ka badan eyda kale ee guryaha lagu dhaqo .
Way badan yihiin dabeecadaha u ekaanta Yeyda . In kasta oo ay leeyihiin madax ka yar yeeyda duurjoogta ah haddana waxay si aad ah isugu eg yihiin indho iyo dhago u eg oo bunni iyo yicib u eg oo ku fadhiya madaxa korkiisa.
Badanaa eeyaha isku dhafan waxay u muuqdaan kuwo la mid ah waalidkood, si kastaba ha noqotee, labada nooc ee kiiskan waxay u egyihiin yeey. Eygaaga ayaa loo dammaanad qaadayaa inuu u muuqdo mid xoogan, si wanaagsan u dhisan oo isboorti ah.
Isku-darka Yeyda waxaa loo kala saaraa sida eey weyn oo culeyskiisu gaarayo meel kasta oo u dhexeysa 50 illaa 120 rodol.
Kala duwanaanshaha culeyskoodu waa sababta oo ah farqiga u dhexeeya labada waalid ee waalidkood iyo dhererka qoyska yeyda.
Eygaagu kama kori doono meel ka sarraysa dherer dhan 24 inji oo u engegaya.
Sida noocyada badankood, haweenku waxay u muuqdaan inay ka yar yihiin cabbir ahaan iyo culeys ahaanba kan ragga.
Isku-dhafka yey wuxuu caadi ahaan dhaxlaa jaakad waalidkood yey.
Caadi ahaan waxay leeyihiin yeel u eg laba-jaakad-dhumuc weyn oo xoogaa yar.
Taariikh ahaan jaakadoodu waxay ka caawisaa inay ka ilaaliso xaaladaha cimilada adag waxayna maqaarkooda ka ilaalisaa burburka. Eeyo badan waxay leeyihiin laba-jibbaar maaddaama ay tahay la-qabsashada duurka oo ay weli wataan noocyo fara badan oo guryaha ku nool.
Adhijirka Jarmalka wuxuu ku imaan karaa midabbo badan oo kala duwan (tusaale ahaan. buluug iyo madow ). Laakiin, waxay la mid yihiin awoowayaashoodii Wolf, adhijirka reer Jarmal ee Wolf ayaa isku dhex jira inta badan wuxuu ku yimaadaa codad jilicsan oo cad ama xitaa madow - oo la mid ah awoowayaashoodii Wolf.
Waxay yihiin kuwa daadiya oo dhexdhexaad ah.
Joogtaynta daadintoodu way sii kordhaysaa inta lagu jiro isbeddelo xilliyeed kasta. Tusaale ahaan waxay daadiyaan marar badan guga marka loo eego xilliga qaboobaha markay bilaabaan u diyaar garow cimilada kulul .
Aad lama saadaalin karo
Dabeecadda isku darka adhijirka Jarmalka ee Wolf waxaa kaliya lagu tilmaami karaa mid aan la saadaalin karin - tani waxay si gaar ah run ugu tahay cabsi ama xaalado cusub.
Sababtoo ah dareenkooda yey waxay waxaa laga yaabaa inuu dagaal badan yahay iyo falcelin aan la sii saadaalin karin markay dareemaan cabsi.
Dareennadan ayaa waxyar laga beddeli karaa iyada oo loo marayo isdhexgalka hore ee yar yar, laakiin tani way ku adkaan doontaa milkiilayaasha cusub.
Tani waa nooc kaas oo waliba aad u ilaaliya oo sidaas darteed isbarasho sax ah oo lala yeesho dadka kale iyo xayawaanka rabaayadaysan waa lagama maarmaan.
Isku darka Jarmalka Shepherd Wolf ayaa caan ku ah baroor.
Tani waa inaysan layaab ku noqon sababo laxiriira dareenkooda xayawaanka ah ee ay ka dhaxleen yeyda. Oohintu waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee yey isgaarsiinta yeyda .
Cabaad aan loo baahnayn oo dhibaato leh ayaa soo bixi kara haddii noocan keligiis loo daayo muddo dheer. Sifadaani waxay eeygan ka dhigeysaa mid aan loo jeclayn shaqsiyaadka mashquulsan
Eygan ayaa sidoo kale leh ugaarsi aad u sarreeya. Sidaa darteed, kuma talinayno inay ku noolaadaan guryaha xayawaannada yaryar leh sida bisadaha, bakaylaha, ama hamster. Waxaa laga yaabaa inay la jaanqaadaan eeyaha kale, laakiin waa in si hubaal ah loo daawadaa oo loo bartaa eeyo kale iyagoo da 'yar.
Ey la dhaqay ( sida Adhijirka Jarmalka ) wuxuu leeyahay shakhsiyad aad uga duwan Eeyga duurjoogta ah. Sidaas darteed waa wax aad u adag in la sii saadaaliyo waxa shakhsiyadeed ee astaamahaaga ay isku dhafan yihiin.
Ku dhowaanshaha tarankaani waxay qaadataa waqti badan iyo dulqaad .
Cayaartu waa hab fiican oo aad iskaga xidho eeygaaga, u dhammayso tamartooda una yareeyso heerarka walaaca.
Waxaa lagu yaqaan inay xishood badan yihiin marka hore.
Si kastaba ha noqotee, aakhirka shakhsiyadda guri-joogga ah ee Jarmalka Shepherd-ka ah ayaa la wareegi doonta. Adhijirka reer Jarmal ee Wolf Mix wuxuu ku barwaaqoobayaa wehel qoys waxayna badanaa jecel yihiin xubnaha qoyskooda.
Mid ka mid ah wadaha Jarmalka iyo Wolf ay wadaagaan waa shakhsiyaddooda daacadda ah.
Yeyga waa xayawaan xirmo ah sidaa darteed layaab malahan isku-dhafkan wuxuu ka difaacayaa qoyskooda.
Maya. Waxaan sidoo kale kugula talin lahayn inaad haysatid isku-darka German Shepherd Wolf oo ku jira guri ay ku jiraan carruur yar yar. Ma sabraan. Waa in si taxaddar leh loola socdaa oo loo bartaa carruurta yaryar laga bilaabo da 'yar. Tani waxay ka caawin doontaa inay dareemaan raaxo.
Eygan ugu fiican guri aan lahayn xayawaan iyo xayawaan kale. Tan badanaa waxaa ugu wacan iyaga oo aan la saadaalin karin iyo xooga ay ugaadhsashada ku hayaan.
Waa asxaab qurux badan waxayna noqon karaan kuwo aad u jecel oo daacad u ah qoyskooda.
Si kastaba ha noqotee, dareenkooda yey iyo saadaalin la'aanta waxay la micno tahay inay sida ugu wanaagsan ugu horumayaan guri leh milkiil khibrad leh oo awood u leh inuu waqti u helo isdhexgalka bulshada iyo tababarka.
Isku darka 'Shepherd Wolf Wolf' wuxuu leeyahay rajo nololeed inta udhaxeysa 9 ilaa 13 sano.
Cimrigoodu wuxuu ku dhow yahay cimriga Adhijirka Jarmalka ah ee 9 illaa 14 sano halkii ay ka ahayd yey duurjoog ah oo kaliya 8 sano ah.
Nasiib darrose, waxaa u sabab ah hiddo-wadaha ay ka dhaxleen waalidkood Jarmalka Shepherd waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka caafimaad ee hidaha . Waxaa ugu daran Hip iyo Elbow Dysplasia.
Dysplasia waa cudur ku dhaca muruqyada ee Adhijirka Jarmalka .
Waa samays aan caadi ahayn oo ka mid ah godka godka kaas oo sababa kala-goysyada eeygaaga inay shiidaan oo xoqdaan halkii ay si habsami leh ugu socon lahayd Waxay u horseedi kartaa xanuun, fiiqnaan iyo arthritis.
Daryeelka isku dhafka yeeyda badhkeed ma fududa oo dhaqso ayey u noqotaa waqti aad u badan maadaama eeygan u baahan yahay dad badan oo is dhex galiya si uu isugu dayo ugana dhigo kuwo la saadaalin karo.
Noocani wuxuu u baahan yahay nidaam jimicsi oo habaysan, tababar joogto ah iyo cunto isku dheelitiran.
Waxaan kaliya kugula talin lahayn iskudhafkan milkiilayaasha eyda khibrada leh.
Eygu waa la dhaqday qiyaastii 135,000 sano ka hor .
Tan iyo markii ay soo ifbaxday shirkad dhan oo soo saarta cunnada ayaa soo ifbaxday eeyo badanina waxay cunaan cunno kibis qalalan. Si kastaba ha noqotee, yeeydu wali waa nooc duurjoog ah waxayna ku faantaa hilibka ceyriinka ee ugaadhsigooda.
Marka, waa maxay cuntada ay tahay inaad quudiso eeygaaga? Cunto hilib ceeriin ku saleysan.
Cunto ceyriin ah ayaa eygaaga siin doonta borotiinka iyo dufanka lagama maarmaanka ah ka caawi inay koraan oo caafimaad qabo.
Shuruudaha tamarta eeyaha waxay kuxiranyihiin arrimo kaladuwan sida heerkooda tamar, da ', xaalad jireed, iyo inbadan. Marka, iska hubi inaad kala tashato dhakhtarkaaga xoolaha mugga cuntada. Waxaan kugula talineynaa inaad quudiso laba jeer maalintii.
Jimicsi Maalinle ah
Daqiiqado 60 + daqiiqo
Layli jecel Muddo Dheer
Tani waa nooc leh shuruudaha jimicsiga sare. Iyaga oo looga tago inay kaligood jimicsi ku sameystaan ​​barxad gadaal ah maahan ikhtiyaar. Waxay u baahan yihiin jimicsi jimicsi si fiican u qaabeysan si looga caawiyo gubida dhammaan tamartooda.
Yeyda waxaa lagu yaqaan inay socdaan ilaa sideed saacadood maalintii.
Socodka ama socodka dheer waa siyaabo fiican si loo jimicsado Adhijirka Jarmalka ah ee Wolf Mix.
Tababbarka xarkaha ayaa lagama maarmaan u ah isku dhafkan. Waxaad u baahan doontaa xakameyn badan eeygaaga marka aad dhex socoto dadweynaha - waxay noqon doonaan kuwo aad u yar oo aan shaqeynin.
Adhijirka Jarmalka ayaa lagu yaqaan inay yihiin nooc caqli badan.
Isku darkaani sidoo kale waa nooc caqli badan. Si kastaba ha noqotee, tani maahan damaanad qaad in tababarka uu fududaan doono. Caqligu waa hal sifo oo keliya oo ka dhigaysa eeyga la tababaran karo. Dabeecadda iyo rabitaanka raalligelinta sidoo kale waa astaamo muhiim u ah tababarka.
Noocani waa mid madaxbanaan, lama saadaalin karo oo madax adag sidaa darteed tababbarka joogtada ahi aad ayuu muhiim u yahay.
Waxaan kugula talin lahayn oo kaliya tarankaan milkiile khibrad leh oo awood u leh sii xoojin wanaagsan iyo joogtada ah.
Samir iyo adkeysiga ayaa lagama maarmaan u ah tababarka .
Bulsheynta isku darka adhijirka reer Jarmal ee Wolf waa lama huraan waxayna sameyn doontaa qayb muhiim ah oo tababarka ka mid ah maxaa yeelay eeygan ayaa badh duurjoog ah badhna waa la dhaqdaa.
Waxay sidoo kale leeyihiin dareen xoog leh oo ugaarsi iyo difaac taas oo u baahnaan doonta inay kula dhaqanto da 'yar.
Ugu dambeyntiina, kicinta maskaxdu waa mid loo baahan yahay isku-dhafkan madaxa adag. Iyadoo aan lahayn kicin maskaxeed oo joogto ah (tusaale ahaan. tababarka khiyaamada ) way caajisi doonaan oo wax burburin doonaan.
Cadayga joogtada ah ayaa looga baahan yahay isku darka 'Shepherd Wolf Wolf' oo ay ugu mahadcelinayaan dhogorta quruxda badan ee quruxda badan!
Waxaan kugula talineynaa inaad cadayato eeygaaga maalin kasta labaad.
Waa inaad iskudaydaa oo aad bilowdid qurxinta eyga oo dhan laga bilaabo da 'yar. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay iskudhafka wolfdog maadaama yeeydu aysan u baran la xiriirka aadanaha ama qurxinta.
Isku dhafka Jarmalka Shepherd Wolf waa nooc qurux badan oo naadir ah .
Haddii aad ka fekereyso inaad qaadato isku-darkaan hubi inaad awood u leedahay inaad siiso iyaga bulshada, tababarka, jimicsiga iyo dulqaadka ay u baahan yihiin. Eygan ayaa sharci darro ka ah gobollo badan waana in loogu talagalay milkiilayaasha khibradda leh oo keliya.
Taas bedelkeeda, eygaagu wuxuu noqon doonaa mid daacad ah, ilaalin kara, caqli badan, ciyaar badan dabcan waxyar lama saadaalin karo.
Saadaalin la'aantooda ayaa laga yaabaa inay ka dhigto rafcaan, laakiin waxay u abuureysaa shaqo badan milkiilayaasha.
Maxay kula tahay iskudhafka bakoorad guriyeysan yey duurjoogta ah? Fikirkaaga hoos noogu dhiib!
Macluumaadka loo yaqaan 'Pitsky Dog Treed Information': The Pitbull Husky Mix
Isku darka Blue Heeler Border Collie: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
imisa ayay yihiin chihuahuas timo dhaadheer
magacyada xayawaanka ee xayawaanka cad
sawirada poodles koob shaaha
magacyada eey gabadha ee pitbulls
intee in le'eg ayay chihuahua Terriers helayaan